Supercomputer Oo Saadaaliyey Xilli-ciyaareedka 2022-23, Kooxda Horyaalka Ku Guuleysanaysa, Niyad-jabka Man United & Arsenal Iyo Saddexda Dhaadhacaya - Laacib
HomeWararka CiyaarahaSupercomputer Oo Saadaaliyey Xilli-ciyaareedka 2022-23, Kooxda Horyaalka Ku Guuleysanaysa, Niyad-jabka Man United & Arsenal Iyo Saddexda Dhaadhacaya
Supercomputer Oo Saadaaliyey Xilli-ciyaareedka 2022-23, Kooxda Horyaalka Ku Guuleysanaysa, Niyad-jabka Man United & Arsenal Iyo Saddexda Dhaadhacaya
Manchester United ma rajayn karto in ay wax walba si degdeg ah ugu hagaagaan marka uu xilka la wareego tababare Erik ten Hag, waxaanay kusii jiri doonaan waqti adag xilli ciyaareedka dambe, sida uu saadaaliyey Supercomputer.
Waxa sidoo kale aanu waqtigu caawin doonin Arsenal, waxaanay dhibbane u noqon doonaan Tottenham oo sannadkanna u dhaadhicisay Europa League, waxaanay Spurs sii ahaan doontaa cudud jirta oo magaalada London ay kaliya kaga horreyso Chelsea.
12 bilood kaddib waqtiga aynu hadda marayno, horyaalka Premier League waxa ka barooran doona Manchester United iyo Arsenal oo mar kale aan kasoo muuqan doonin Champions League, sida uu Supercomputer ku sheegay saadaal waqtiga ay run noqonayso amaba beenoobayso ay 12 bilood ka hadhsanyihiin.
Mikel Arteta oo ay kooxdiisu sannadkan ku dhamaysatay kaalinta lixaad ayaa hal buundo hoos uga sii dhici doonta xilli ciyaareedka dambe, waxaanay ku dhamaysan doontaa kaalinta toddobaad, halka Manchester United ay hal darajo sare usoo kici doonto oo ay ku dhamaysan doonto booska kaalinta shanaad.
Kaalinta afraad ayaa waxa iska yeelan doonta Tottenham oo waxyar ka dambayn doonta Chelsea oo iyaduna booska ay xilli ciyaareedkan gashay sii xajisan doonta.
Manchester City oo horyaalka Premier League ku guuleysatay ayaa waxay samaysay saxeexa Erling Haaland oo noqon doono mishiinkooda goolasha, waana cudud iyo xoog kale oo kusoo korodhay safkii uu Guardiola ku qaaday koobka, taasina waxay ka caawin doontaa inay horyaalka difaacdaan, halka Liverpool ay calafsan doonto booska kaalinta labaad ee ay xilli ciyaareedkii hadda tegayna gashay.
Saddexda kooxood ee horyaalka kusoo biiraya xilli ciyaareedkan ee Fulham, Nottingham Forest iyo Bournemouth ayaanu nasiibkoodu ka caawin doonin inay kusii jiraan heerka koowaad, waxaanay u dhaadhici doonaan heerka labaad ee ay ka yimaaddeen, sida ay saadaasha Supercomputer sheegtay.
Halkan kaga bogo saadaasha Supercomputer ee xilli-ciyaareedka dambe